डीडीसीको गुणस्तरमा कुनै कमी आएको छैनः महाप्रबन्धक पौडेल - DURBAR TIMES
Home डीडीसीको गुणस्तरमा कुनै कमी आएको छैनः महाप्रबन्धक पौडेल
डीडीसीको गुणस्तरमा कुनै कमी आएको छैनः महाप्रबन्धक पौडेल
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको दुग्ध विकास संस्थान वि.सं. २०२६ साल श्रावण १ गते संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत तत्कालिन दुग्ध विकास वोर्डबाट दुग्ध विकास संस्थानमा रुपान्तरण गरिएको हो । नेपालमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत रहेको यो संस्थानको उद्देश्य, ग्रामिण दुग्धजन्य उत्पादनलाई शहरी उपभोक्तासँग जोड्नु हो । जस अनुसार यसले हाल देशभरका ४५ वटा जिल्लाबाट दुध संकलन गरिरहेको छ । देशभर रहेका १२ वटा दुध प्रशोधन कारखाना, ६५ वटा चिलिङ सेन्टर, ७ वटा याक चीज उत्पादन केन्द्र, ५ वटा कन्चन चीज उत्पादन केन्द्र, एउटा रसबरी र पनिर उत्पादन केन्द्र र २ वटा मोजरेल्ला चीज उत्पादन केन्द्रमार्फत संस्थानले उपभोक्तासामु आफ्नो उत्पादन पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
संस्थानको हालको संरचना, उत्पादन र बजार व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक रुद्र प्रसाद पौडेलसँग दरबार टाइम्सका एल के दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संस्थान हाल नाफामा छ कि घाटामा ?
प्रशासनिक कठिनाइ र कोरोना माहामारीका कारण संस्थानको अहिलेको संचित घाटा रकम ७७ करोड रहेको छ ।
कोरोना माहामारीले संस्थानलाई कस्तो प्रभाव पार्यो ?
विश्व अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको कोरोना माहामारीबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ९० हजार लिटर दुध बिक्री हुने गरेकोमा हाल दुध ७८ हजार लिटर मात्र बिक्री भैरहेको अवस्था छ । विभिन्न उद्योग तथा शैक्षिक संस्थाहरु बन्द रहँदा संस्थागत व्यापारसमेत हुन सकेको छैन । दैनिक १७ हजार लिटर दुध संस्थान मार्फत बिक्री हुने गरेकोमा हाल बिक्री न्युन रहेको छ । कोरोनाकै कारण दुध बिक्रीमा १०% ले कमी आएको छ भने दुग्ध विकास संस्थानको समग्र उत्पादन विक्रीमा ३० % ले कमि आएको छ। हालको विक्री सुधारउन्मुख देखिएको छ।
दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादनहरु के के हुन् ?
दुधबाट बन्ने सबै किसिमका परिकारहरु दुग्ध विकास संस्थानमा उत्पादन हुन्छन् । हाल संस्थानमा २८ दूधजन्य वस्तुहरु उत्पादन भइरहेका छन् । जसमा ४ प्रकारका दुध, विभिन्न प्रकारका दहि( सुगर फ्री, सादा, गुलियो दही प्रोबायोटिक) मिठाई, पनिर, चिज (याक, मोजरेल्ला, कन्चन), धुलो दुध लगायतका परिकारहरु रहेका छन् ।
संस्थानसँग आबद्ध किसान कति छन् ?
अहिले हामीसँग २ लाख भन्दा बढी किसान र १२०० भन्दा बढी दुध उत्पादक सहकारी संस्थाहरु आबद्ध रहेका छन् । जसबाट हामी दैनिक १ लाख ७० हजार देखि २ लाख लिटरसम्म दुध संकलन गर्छौँ ।
दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालनका क्रममा कस्ता समस्याहरु देखा परेका छन् ?
संस्थान सञ्चालनका लागि नीतिगत समस्या त छैन । तर, प्रशासनिक समस्याहरू भने प्रसस्त देखिने गर्छन् । पुरानो संरचना भएकाले यहाँ रहेका पुराना मेसिनहरू बिग्रिरहने समस्या हुन्छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको छ । यी सबै समस्याहरुको समाधानको लागि हामीले अहिले संरचनागत सुधारको थालनी गरेका छौँ ।
संस्थानमा उत्पादित सामाग्रीको बजार व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? बिक्री वितरण कार्य सहछ छ ?
संस्थाको कार्यालय भएको सबै स्थानमा आफ्नो विक्री कक्ष संचालनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा लैनचौर, न्युरोड र खुमलटारमा संचालन भैरहेको छ भने उपत्यका बाहिर दाङ्ग, सुर्खेत र जुम्लामा पनि विक्री केन्द्रहरु राखिएको छ। साथै सबै आयोजनाहरुबाट नियमित रूपमा प्रशोधित दुध तथा दुधजन्य पदार्थहरु डिस्ट्रिब्युटर मार्फत बुथमेन र फ्रेन्चाइज बिक्री वितरण भैरहेको छ। संस्थानबाट उत्पादित सबै खालका दुध तथा दुधजन्य पदार्थ नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार उत्पादन हुने र बजारीकरण हुनेगरेको छ।
संस्थानमा सुधार ल्याउनका लागि के गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
संरचनागत रूपमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने छ । यसका लागि दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव रहेको छ । त्यसपछि अन्य योजनाहरु बनाउने लक्ष्य रहेको छ । त्यस्तै आर्थिक पारदर्शिता प्रवर्धन गर्न हालैमात्र हामीले लैनचौर कार्यालयमा QR SCAN प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेका छौँ । बिस्तारै अन्य काउन्टरहरुमा पनि यो सेवा विस्तार गर्ने छौँ ।
संस्थानको महाप्रबन्धकको हैसियतमा सर्वसाधारणहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
दुग्ध विकास संस्थानले किसान र उपभोक्ताबिचको पुलको काम गर्दै आइरहेको छ । हामी नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी भावना लिएर काम गरिरहेका छौँ । गाउँको उत्पादन शहरमा र शहरको पैसा गाउँमा पुर्याउन हामी किसानहरुको साथी भएर काम गरिरहेका छौँ । हामीकहाँ उत्पादन हुने दुग्धजन्य पदार्थहरु सबै नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार उत्पादन हुने गर्छ । दुग्ध पदार्थहरू गुणस्तरीय भएको हुँदा ढुक्क भएर उपभोग गर्नुहुन आम उपभोक्ताहरूमा जानकारी गराउँदछौँ ।
कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयका पूर्व सह-सचिव पौडेल वि.सं. २०७६ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट दुग्ध विकास संस्थानको महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका हुन् । दरबार टाईम्सले लिएको अन्तरवार्ता मार्फत संस्थानको कार्य, प्रगति र लक्ष्य बारे बताउँदै महाप्रबन्धक पौडेलले नेपालीहरुको महानचाड विजया दशमी, दिपावली तथा छठको अवसरमा सबै ग्राहक वर्गहरुमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।